Maxaa kala heysta Caawa Spain iyo Talyaaniga Finalka Euro 2012?
7/1/2012 11:15:00 A
| Comments() Kiev--KNN--Iyadoo caawa lagu wado in lasoo afmeero koobka Qaramada Qaarada Yurub 2012 ayaa hadana waxa lasii bixinayaa xulka la isleeyahay wuu hanan karaa Euro iyadoo predictionada ay yihiin kuwa xul loo badinayo. Inkabadan 100 qofood oo ciyaaraha xiiseeya muqdishana ku dhaqan ayaa sheegay in Talyaaniga Si fudud inuu ku dhaafi karo waddanka Spain.
Ciyaarta Caawa waxa la sheegay inuu dhex dhexaadin doono Pedro Proenca oo udhashay Dalka Portugal ayaa waxa laga yaabaa in kaararka ciyaarta la bixinayo ay bataan maadaama Waddamada ciyaaraya ay dagaal badan yihiin.
Guulaha marka la eego labada dal waxaa badan Talyaaniga iyadoo ay isku Group kasoo wada baxeen labada xul koobkan ay caawa finalkiisa wada ciyaari doonaan.
Waan Arki doonaa Guusha cida hanata hadana waxaa loo badinayaa inay si fudud ku adkaato waddanka Talyaaniga.
Radio Kulmiye Muqdisho 88.0 MHTZ ayaa si toos ah utabin doonta Ciyaarta Caawa Dhexmari doonto Talyaaniga iyo Spain.
Natiijada Kulankaasi Adag dib ayaad ka maqli doontaan insha allah
Inkabadan 100 qofood oo ciyaaraha xiiseeya muqdishana ku dhaqan ayaa sheegay in Talyaaniga Si fudud inuu ku dhaafi karo waddanka Spain. Ciyaarta Caawa waxa la sheegay inuu dhex dhexaadin doono Pedro Proenca oo udhashay Dalka Portugal ayaa waxa laga yaabaa in kaararka ciyaarta la bixinayo ay bataan maadaama Waddamada ciyaaraya ay dagaal badan yihiin. Guulaha marka la eego labada dal waxaa badan Talyaaniga iyadoo ay isku Group kasoo wada baxeen labada xul koobkan ay caawa finalkiisa wada ciyaari doonaan. Waan Arki doonaa Guusha cida hanata hadana waxaa loo badinayaa inay si fudud ku adkaato waddanka Talyaaniga. Radio Kulmiye Muqdisho 88.0 MHTZ ayaa si toos ah utabin doonta Ciyaarta Caawa Dhexmari doonto Talyaaniga iyo Spain. Natiijada Kulankaasi Adag dib ayaad ka maqli doontaan insha allah saaxiba yaal bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ok dhaman shaqaalah kuliye by guuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulllllllllllllllllllll talyaaniga ok by bybybybybybybybybybybybybybybyyyyyyyyyyyyyyyyyyybyybybybybyb Posted by cusman dahir cabdala ali on 7/1/2012 1:07:29 PM Name: (Required)